JUNE&MAY: Edwin နှင့် သူ့မားမား အလွဲများ
Posted by JuneOne at 2:20 AM
Anonymous October 27, 2012 at 1:44 PM
ရီရတယ် အပေါ်က ဘိုက်နာတာ...
ကလေးဆိုတာ အနီးကပ်ထိန်းတဲ့လူပဲ သူ့အကြောင်းသိတာလေ..အကြောင်းမသိရင် မလွယ်ဘူး...
NSA October 27, 2012 at 10:15 PM
Edwin May ၂ ယောက်လုံးပြောတာကို နားမလည်ဘူး..ဟီး...။
အက်ဒွင်ပြောတာ တစ်ခါတလေ နားလည်ပေမယ့် ထင်မှတ်မထားတဲ့ မေးခွန်းမျိုးဆိုတော့ ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ ကြောင် ကြောင် သွားတယ်..။
My son (7 months) also sometimes constipated.
Where to find (kon yoo) near choa chu kang, yew te area?
Thanks so much for your posts about baby constipation.
JuneOne October 29, 2012 at 9:13 PM
အရင်တုန်းက 787A ဟော်ကာစင်တာ နားက မီနီမားကတ်အရှေ့မှာ ကုလားဆိုင်မှာ ရောင်းတယ်။အခု အဲဆိုင်မရောင်းတော့ဘူး။ဘူးဂစ်ကွန်းဘတ် MRT နားမှာရတယ်ပြောတယ် မေးပေးမယ်နော်။
JuneOne October 30, 2012 at 12:57 PM
ဘူးဂစ်ကွန်းဘတ် MRT နား Blk 369 မှာ ရောင်းတယ်တဲ့။တစ်ခါတစ်လေတော့ မရဘူးတဲ့။
I have been reading your posts silently since one year ago. Would like to get your advise on childcare or kindergarten in YewTee. I m staying at blk633 near Yew Tee Mrt. Learn that Edwin is studying at PCF. How is it? How much they charge? is it childcare or 3hrs kindy?
Sorry for asking you so many questions,sis. I am puzzled at looking foraschool for my son :)
JuneOne October 31, 2012 at 1:05 PM
edwin က ၂၀၀၈ မွေးတာ ကို ၂၀၁၁ မှာ alphabet playgroup (blk 785)မှာ pre nursery ၉နာရီကနေ ၁၁ နာရီ စထားတယ်။တစ်လ ၁၄၀ ပေးရတယ်။ပြီးတော့ ၂၀၁၁ မေ မှာ PAP မှာ ၂၀၁၂ အတွက် ရက်ဂျစ်စတာ လုပ်ပြီး PAP (blk 789)မှာ Nursery ထားတယ်။PAP မှာ ၁၅၀ ပေးရတယ်။LT pass ကိုင်သူတွေဆို ၁၈၀။
ဘာလို့ PAP မှာထားရလဲဆိုတော့ သူတတ်နေတဲ့ playgroup က Nursery မသင်တော့လို့။PAP မဆိုးပါဘူး။အခုတော့ ကျောင်းပျော်နေပြန်ပြီ။
သမီးလေးကိုတော့ နောင်နှစ် ကို သားလေးတတ်ခဲ့တဲ့ Alphabet မှာပဲ စထားမယ်။ပြီးမှ PAP ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့ PAP မှာ pre nursery ကနေ စမထားလဲဆိုတော့ PAP က citizen တစ်ဈေး၊PR တစ်ဈေး၊ foreigner တစ်ဈေး ဆိုတော့ သမီးလေးက foreigner ဆိုတော့ ဈေးကြီးပါတယ်။Alphablet ၁၄၀ ပေးရ
ချိန်မှာ PAP မှာ ၂၃၀ လောက် ကောက်ပါတယ်။(pre nursery က ဈေးကြီးတယ် ဒီပြင့်အတန်းတွေထက်)အချိန်က အတူတူ ၂ နာရီပါပဲ။နောက်ပြီး Alphabet က အိန္ဒိယ လူမျိုး ဆရာမ က သဘောကောင်းတယ်။ကလေးတွေ ကို ဆက်ဆံပုံ သဘောကျတာရယ် ကြောင့်ပါ။
အသိအမ တစ်ယောကကတော့ သူ့သားလေးကို agape little unit (632A)မှာ pre Nuresry ထားတယ်။
ကောင်းတယ်ပြောတယ်။ အဲ့မှာက prenursery ပဲရှိလို့ နောင်နှစ်ကို သူ့သားလေးကို yew tee cc နားမှာ၇ှိတဲ့
Bible Presbyterian Church kindergarten မှာထားမယ်ပြောတယ်။ဈေးကတော့ PAP နဲ့ သိပ်မကွာဘူး။
ကျောင်းသားများတယ်ပြောတယ်။ကျောင်းလခက term နဲ့ပေးရတယ်။ဥပမာ ၁၀ ချိန်စာ ဘယ်လောက်ပေါ့။
အဲ့မှာ PAP လိုပဲ Nuresry, K1,K2 ရှိတယ်။pre nursery ရှိမရှိတော့ မသိဘူး။ဒါပေမယ့် K1,K2 ကို သူက ၃နာရီပဲသင်တယ်။PAP က ၄ နာရီ။တို့ကျတော့ အဲနားက နဲနဲ လှမ်းနေသလားလို့ တို့က 791 မှာဆိုတော့။
block 633 မှာနေတာ ကလေးက အခုမှ pre nursery နေမှာဆို 632 A မှာ ဆိုနီးမယ်။pre nursery က 2013 intake ဆို ၂၀၁၀ မွေးတွေအတွက်လေ။
၂၀၀၈-K1 နဲ့ ၂၀၀၇ တွေက K2 တတ်ရမှာ ၂၀၁၃ အတွက်။PAP မှာ အပ်ရင်တော့ တောက်လျောက် ကျောင်းမပြောင်းရတော့ဘူးပေါ့။pre nursery ကို foreinger ဈေး နဲနဲတော့ကြီးတယ်။
JuneOne October 31, 2012 at 1:54 PM
PCF (PAP) နဲ့ အခု အပေါ်က ပြောတာတွေတာက playgruop ဆို ၂နာရီ၊nursery ဆို ၃ နာရီ။K1,K2 က ၄နာရီပါ။အချိန်ပိုင်းပါ။Day care ထားချင်ရင်တော့ 788 ကagape little unit မှာ အထားများကြတယ်။
တစ်ချို့ မြန်မာတွေလဲလာထားတာတွေ့တယ်။သူကတော့ တစ်လ ၁၀၀၀ ကျော်လို့ပြောသံကြားတယ်။တစ်နေကုန်ပေါ့.။
JuneOne October 31, 2012 at 1:18 PM
alphabet playgroup (blk 785) ကတော့ အားလုံးတစ်ဈေးထဲပဲ။632A ကျတော့ တို့ဆီကနေ လမ်းနဲနဲ လျောက်ပြီး ကားလမ်း ဟိုဘက် ကူးလိုက်ပဲ။
သမီးလေးလဲ မအပ်ရသေးဘူး။ alphabet playgroup (blk 785)က ဒီဇင်ဘာမှ open house လုပ်တာမလို့။အခုပဲ 632 A မှာထားတဲ့ အမကိုမေးလိုက်တာ တစ်လ ၃၅၀ တဲ့ playgroup ကော၊prenursery ကော။
How is PAP teaching? Since it is just3hours class, is that Ok enough? i am worried for language. Because we only talking in myanmar andabit English at home.
Sorry for asking many questions again :)
JuneOne November 1, 2012 at 9:20 PM
မဆိုးပါဘူး။သူတို့မှာ Eng စာဆရာမတစ်ယောက်၊chinese ဆရာမ တစ်ယောက်သင်တယ်။အင်္ဂလိပ်ဆရာမ က အတန်းပိုင်။သားလေးကိုထားတော့ သူ့အတန်းပိုင်ဆရာမ ကို သားလေးက အိမ်မှာ မြန်မာ စကားအပြောများကြောင်း ပြောပြထားရတာပေါ့။သင်ကြားရေးက ကောင်းပါတယ်။ကျောင်းသားတွေပေါ် ဆက်ဆံတာကတော့ အတန်းပိုင်ဆရာမတွေပေါ် မူတည်တယ်။သားလေးတော့ ကျောင်းတတ်ပြီး ၃ ၊၄ လ အကြာမှာတော်တော်တိုးတတ်လာတယ်။ပထမ ၁ လ၊၂ လလောက်တော့ နဲနဲ သီးခံရတာပေါ့။နောက်ကျတော့လဲ ကလေးက used to ဖြစ်သွားတာပါပဲ။PCF ဆို ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက နောင်နှစ်အတွက် လက်ခံပြီးပီ။အပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မြန်လေး စုံစမ်းတော့နော်။
sharing ...nice to read...http://8888linker.blogspot.sg/2012/11/blog-post_9891.html
JuneOne November 5, 2012 at 10:34 PM
Edwin school is at blk789? How many PCF are there? When i call and make inquiry,they said they are at Blk 786.I m confused. The principle said they will open another class at afternoon and will have vacancies for us. Please highlight me how many PCF are around there? :)
JuneOne November 6, 2012 at 11:13 AM
Yes..786..PCF ..but their N1K1K2 are located at different blocks..so Edwin at 789 under 786 PCF ...I mean that different class room under the 786 PCF..your call is right..
JuneOne November 6, 2012 at 11:15 AM
JuneOne November 6, 2012 at 3:03 PM
PCF CHUA CHU KANG (BLK 786)
PCF YEW TEE (BLK 690D) ,
PCF YEW TEE (BLK 682) ,
PCF YEW TEE (BLK 625) ,
PCF YEW TEE (BLK 543) ,
PCF YEW TEE (BLK 608)